I-WordPress Multi-Domain Login Loops
NgoMsombuluko, Disemba 19, 2011 Douglas Karr
Isikhashana sibuyile, sisebenzise ukufakwa kwe-WordPress enezizinda eziningi (hhayi isizinda) ngokunika amandla izici zabasebenzisi abaningi nokufaka i-plugin yezizinda eziningi. Lapho sesenze konke kusebenza, enye yezingqinamba esangena kuzo kwakuyiluphu yokungena lapho othile ezama ukungena ku-WordPress kwesinye sezizinda. Okuxaka nakakhulu, bekusenzeka kuFirefox naku-Internet Explorer, kepha hhayi i-Chrome.
Silandele le nkinga kuze kube sekusetshenzisweni kwamakhukhi wesiphequluli we-WordPress. Bekufanele sichaze indlela yekhukhi engaphakathi kwe- WP-config.php file bese konke kusebenze kahle! Nakhu ukuthi ungazichaza kanjani izindlela zakho ze-Cookie ngaphakathi kokumiswa kwesizinda sakho esiningi:
Sibonga u UJoost De Valk ngokufaka kwakhe kulolu daba. Kwakuyisikhashana esedlule, futhi angizange ngime ukumbonga ngosizo lwakhe.
Tags: isizinda esiningii-wordpress mui-wordpress multidomain
Ukuhlolwa komqondo 2.0